Macaamiil badan ayaa soo bandhiga nidaamyo cusub oo nadaafadeed oo loogu talagalay suuqa maxaliga ah ee dalal kala duwan, macaamiisha kala duwan waxaan ku siin karnaa xalal taxane ah sida loogu baahan yahay. Ilaa hadda waxaan u dhoofinaa mashiinka nadiifinta iyo qalabka nadiifinta Koonfur-bari Aasiya iyo Yurub in ka badan 10 sano.
Macaamiil iyo tayo marka hore
SAYNIS, WAXQABAD SARE IYO BADBAADINTA DEEGAANKA
Wadashaqeynta kooxeed waa mid aad muhiim u ah, qof walba waa inuu lahaadaa awood uu kula shaqeyn karo dadka kale. Waxaan heysanaa koox aad u fiican:
Iibinta - Iibinta MA iibinayaan alaabtooda oo keliya. Waa inay fahmaan baahida macaamiisha oo ay ku xalliyaan dhibaatada wada xiriirkooda hufan, ka dibna dib u soo celiyaan su'aalaha oo looga baahan yahay farsamayaqaannada iyo hoggaamiyeyaasha.
Farsamo - Si firfircoon u aqbal talo soo jeedinta macaamiisha si loo hagaajiyo loona soo saaro alaab cusub si shaqada looga dhigo mid fudud.
Soo-saaridda-Tayada xasilloon ayaa aasaaska u ah warshadda, sii wad iibsashada alaabta ceeriin ee lagu kalsoon yahay, maaraynta warshadda adag, hannaanka wax soo saarka ee deggan, iyo heerarka kormeerka adag.
Samee go'aanka saxda ah, mas'uul ka ah shaqaale kasta iyo macmiil kasta.
Khibrad Leh - Bixi qalab casri ah iyo nidaam dayactir dhagax in ka badan 30 gobol oo adduunka ah muddo 10 sano ah.
Alaabooyinka - Badeecooyin kala duwan oo aad kala doorato. Qalab kala duwan iyo naqshadeyn dalal kala duwan, noocyo kala duwan oo wakiilo dhagax ah si wax looga qabto dhibaatooyinka dhagaxa kala duwan.
Adeeg --- Adeeg dhammaystiran oo hufan ka dib iibka ayaa kuu oggolaanaya inaad walwal qabin.
DAAWO DHAMMAAN MACLUUMAADKA